Agbaze fụọ ákwà (gbazee blown na-abụghị kpara akwa) bụ ngwaahịa mere nke elu-gbazee index eyi (polypropylene) mejupụtara na-abụghị kpara akwa. Ọ bụ isi ihe nke nkpuchi. Akara nke eriri spinneret nwere ike iru 0.001 na 0.005 mm. E nwere ọtụtụ voids, N'ụbọchị nke abụọ Ọdịdị, ezi ndọlị na-eguzogide, ...
Ngwaahịa plastik na-arụ ọrụ dị mkpa n'akụkụ dị iche iche nke mmepụta ihe na ọrụ ugbo na ndụ yana ezigbo njirimara ha dịka ịdị arọ, ike dị elu, nguzogide corrosion, na nhazi dị mfe. Agbanyeghị, iji ngwa ahịa plastik gbasaa, mkpofu o ...
Olee otú ịhọrọ ịkwanyere waya anwụrụ?
1. Akara akara nke igwe eletriki eletriki eletrik, payaa ntị ma aha onye nrụpụta, ụdị ngwaahịa ngwaahịa, na ụkpụrụ mmejupụtara egosipụtara na eriri waya anaghị agbanwe agbanwe, ma gbochie ngwaahịa adịgboroja dao. 2. Ọdịdị adịghị emebi, na ekwesighi ịkọ nkọ, t ...